Supercomputer Soo Saaray 11ka Xiddig Ee Ugu Qaab Ciyaareedka Xun Xilli Ciyaareedkan Premier League | Laacibnet.net
Supercomputer Soo Saaray 11ka Xiddig Ee Ugu Qaab Ciyaareedka Xun Xilli Ciyaareedkan Premier League
Xogta Supercomputer ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang uu yahay xiddigaha ugu qaab ciyaareedka liita xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, waxa uu ka horeeyaa xiddiga Liverpool Sadio Mane.
Kabtanka Gunners oo qirtay inuu dhibtoonayo xilli ciyaareedkan ayaa xogta laga hayo waxay muujineysaa inuu seddex gool kaliya dhaliyay 15 kulan uu saftay horyaalka. Si kastaba, dad badan ayay la yaab ku noqon doontaa Mane oo ku jira kaalinta labaad.
Xogta oo ay uruurisay shirkada Fantasy5 oo adeegsaneysa Supercomputer ayaa waxa ay ciyaaryahan walba ku qiimeeyaan dhibcaha uu heysto iyo dhibcaha laga filan karo.
Aubemayang ayaa hoos uga dhacay heerkiisii caadiga ahaa, 4.1 dhibcood ayuu hoos uga degay dhibcihii laga filayay todobaad walba. Waana hoos u dhaca ugu weyn Premier League.
Mane ayaa ku xiga isagoo 3 dhibcood hoos uga tagay dhibcihii laga filayay todobaad walba si la mid ah saaxiibkiisa Trent Alexander-Arnold kaasoo isna hoos uga degay dhibcihii laga filayay 2.. Daafaca midig ee Liverpool ayaa dhibtoonaya xilli ciyaareedkan isagoo aan u dhaweyn wacdarihii uu dhigay xilli ciyaareedkii hore oo uu dhaliyay afar gool horyaalka isagoo caawiye ka ahaa 13 gool kale.
Weeraryahanka Man United Mason Greenwood ayaa isna 2.8 dhibcood hoos uga digay halkii laga filayay isagoo kaliya hal gool dhaliyay 11 kulan uu saftay.
Shaxda xiddigaha ugu liita Premier League xilli ciyaareedkan waa sida tan:
Goolhaye: Aaron Ramsdale (Sheffield United)
Daafac Midig: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)
Daafac Dhexe: Enda Stevens (Sheffield United)
Daafac Dhexe: John Egan (Sheffield United)
Daafac Bidix: Luke Shaw (Man United)
Garab Midig: Willian (Arsenal)
Khad Dhexe: Kai Havertz (Chelsea)
Khad Dhexe: Joao Moutinho (Wolves)
Garab Bidix: Sadio Mane (Liverpool)
Gooldhaliye: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)
Gooldhaliye: Mason Greenwood (Man United)
Waxaa iyadana la yaab aheyn inay shaxda ka soo muuqdaan Willian iyo Kai Havertz kuwaasoo ku dhibtoonaya kooxahooda cusub ee Arsenal iyo Chelsea
Computer Ka Xitaa cunsurnimo ayay Ku qabadsiyeen Mane sanadkan waaba ninka Liverpool Wado maxuu Timo weyne Salah Iyo Firmino u arki wayay Horto duwaha Liverpool Wala Helyay Arnold ebar Waye sanadkan.
Booska mane Timo werner aya kaga haboonaa
Komputerkan shaxdiisa mane mooyaan wan ku raacsanay lkn booska maane sterling ayan ku badali laha